Stepper Motor, qiray Ku marooji Motor, Bioplar Stepper Motor - ACT
Laba-Phase, Hybrid Afar-Phase Stepper Motor
Hybrid Saddex-Phase Stepper Motor
Yaabo gear Stepper Motor
Jejebiyey Stepper Motor
Iskudhafan Stepper Motor
Laba-Phase, Afar-Phase Hybrid Stepper Motor Driver
Hybrid Saddex-Phase Stepper Motor Driver
Ball Ku marooji Motor
Xiran-Loop Stepper Motor
Xiran-Loop Stepper Driver
Howlsocodsiinta Motor Driver
Darawal Baaskiil DC ah
Laba-Phase, Hybrid Afar-Phase Stepper Motor Driv ...
Laba-Phase, Hybrid Afar-Phase Stepper Motor 34HS
Isku-darka Stepper Motor 17HS
HBS86H xiran-Loop Stepper Driver
Changzhou ACT Motor Co., Ltd la aasaasay sanadkii 2010, iyadoo labo dhirta saarta. Its saarka gaari sanadlaha ah in ka badan 2 milyan oo unug, gaar 200 shaqaale iyo 50000 bakhaar mitir oo laba jibbaaran. Waxay leedahay 1 Xafiiska laanta Yurub iyo 2 Xafiisyada dibadda ee Shiinaha.
Ka dib markii in ka badan toban sano oo shaqo adag, waxaan ku guuleystay Nicmada ka badan 3,000 oo macaamiisha, iyo in ka badan 850 macaamiisha wax ka badan 5 sano.
ACT WADIDDA ayaa ogaaday wax soo saarka ee warshadaha 4.0, wax soo saarka dheeraad ah oo xirfad leh, iyo waxay bixisaa in ka badan 10,000 nooc oo ah ikhtiyaarada wax soo saarka si ay u buuxiyaan baahida macaamiisha ee warshadaha oo kala duwan.
Waxaan leenahay 26 farsamo, 15 kuwaas oo in ka badan 10 sano oo waayo aragnimo ka shaqeeya. Waxaan leenahay 35 iibka iyo shaqaalaha adeegga kuwaas oo ay fuliyeen kooxihii shaqada gaarka ah ee pre-sale,-iib aheyn ka dib, iyo ka dib iibka si loo hagaajiyo tayada iskaashiga.
Waxaan leenahay 2 warshadood oo 2 xafiisyada ee Shiinaha. In 2014, waxaan aasaasay laan in Germany. Adeegga bakhaaraynta caalamiga ah waa uun u ah dhalmada ammaan ah oo hufan alaabta.
Waxaan la go'an in ay cilmi-baarista iyo horumarinta iyo casriyaynta ee alaabta our, iyo maalgashiga sanadlaha ah ee cilmi-baarista iyo horumarinta ka badan 10 million yuan.
Dalaka STEPPER WADIDDA-39BYGHL (16HSL)
NEMA 23 Stepper Motor Driver , Stepper Motor Driver , Kit Driver CNC Stepper Motor , Digital Stepper Howlsocodsiinta Driver , Close Loop Stepper Motor Driver , NEMA 17 Stepper Motor Driver ,